Amanqaku kaBrian Hoffman Martech Zone |
Amanqaku ngu UBrian Hoffman
UBrian ngumququzeleli wentengiso e Ukubulawa kwabantu, Isiqalo esisekwe eSeattle esigxile kuyilo lwe-infographic, imifanekiso eshukumayo, kunye nemizobo esebenzayo I-Killer Infographics iyazingca ekutsaleni italente ephezulu ekwazi ukuhambisa ikopi ebanzi, idatha yohlobo oluthile viz, umzekeliso wesiko, kunye nokukhuthaza ubuchule. UBrian wakhulela kwiintaba zasePennsylvania naseVermont, kwaye ngoku uchitha yonke imihla uyakwazi ukukhwela ikhephu kunye nokunyuka intaba kwiPacific Northwest.
Izigqibo ezi-5 zokuThengisa kwi-Intanethi ngo-2014
NgoMvulo, nge-27 kaJanuwari, 2014 NgeCawa, nge-26 kaJanuwari 2014 UBrian Hoffman
Ukuqala konyaka omtsha kuhlala kuza nezicwangciso zokuthengisa ezintsha, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nemincili ehlaziyiweyo malunga namathuba alindele naliphi na ishishini. Ukuba ulawula intengiso kwinkampani yakho, okunokwenzeka kunokuba kukhulu kakhulu. Ngethamsanqa, sinezinye iingcebiso zokukunceda ukhulise uphawu lwakho kunye ne-intanethi elandelayo ngo-2014. Nazi izisombululo ezi-5 zokuthengisa kwi-Intanethi eziza kwamkelwa namhlanje: 1. Amp Up Your Marketing Marketing Jonga u-2014